बागमती प्रदेशमा पनि एमालेमा भुकम्प ? एमाले छोडेको घोषणा गर्दै सनाखत गर्न पुग्ने सांसदको लिष्ट यस्तो छ – Classic Khabar
August 31, 2021 58
नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक महिला मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य अप्ठेरोमा परेकी छन् । उनलाई ११ जना सांसदले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री पद अप्ठेरोमा परेको हो । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका १२ सांसदले एमाले त्यागेर माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन् ।
Prevभरमणीको प्रस्तुती हेरेपछि पुर्वयुवराज पारस शाहले दिए यस्तो प्रतिकृया !
Nextमन्त्री छान्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा माधव र उपेन्द्रबीच के विषयमा भयो बबाल ? त्यतीकै सकियो बैठक